Noho ny fisian’ny andian-drahona matanjaka ao amin’ny lakandranon’ny Mozambika izay mihamanatona ny morontsirak’i Madagasikara dia hahazo orambe ny faritra atsimon’ny Nosy ary mahazo fampitandremana miloko mavo mihitsy. Mila mailo noho izany ny mponina amin’ireo faritra ireo.
Mitohy araka izany ny erika sy ny hatsiaka ho an’ny eto Antananarivo. Mila miomana amin’izany ireo mpianatra efa miverina an-tsekoly sy ny mpiasa mandeha maraina.
Efa hatramin’ny asabotsy teo ny toetr’andro tsy mari-toerana, saika manerana ny Nosy raha ny filazan’ny mpamantatra ny toetry ny andro. Anisan’ny nahazo orana betsaka ny tao amin’ny faritra Melaky sy Bongolava. Miovaova ny toetrandro, hatramin’ny anio, any amin’ny faritra atsimon’i Madagasikara any. Ny orana dia mety hihitatra ka hahazo an’iny faritra Menabe sy ny morontsirak’i Melaky iny izany, rahampitso
Efa nivoaka ny voka-panadinana BEPC ho an’ny faritra sasany. Anisan’ny namoaka izany voalohany, ny asabotsy teo ny tao amin’ny Dren Vakinankaratra, Cisco Faratsiho. Nahatratra 55,90% ny tahan’ny fahafaham-panadinana BEPC tao an-toerana. Niakatra izany taha izany raha oharina ny tamin’ny taon-dasa, 46,23%.
Efa nivoaka ihany koa ny voka-panadinana BEPC ao amin’ny Cisco Soalala, Ivohibe, Ambatomainty; Mandoto, Matsihatra Ambony, Ikalamavony…